အသားအရေလှခြင်း - WoW လမ်းညွှန်များ | WoW လမ်းညွှန်များ
အဆိုပါ Lich ဘုရင်၏အမျက်တော်
ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီ
con skinning သင်သည်တတ်နိုင် အရေခွံကိုစုဆောင်းပါ သငျသညျအနိုင်ယူဖို့စီမံတိရိစ္ဆာန်များနှင့်သားရဲ၏။
Azeroth အရေခွံလမ်းညွှန်အတွက်တိုက်ပွဲ။ အကောင်းဆုံးစိုက်ပျိုးရေးလမ်းကြောင်းများ
por Adrian Da Cuña လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
အိုဘုရားသခင်၊ ဤ Skinning in Battle for Azeroth လမ်းညွှန်တွင်မြေပုံပေါ်တွင်စိုက်ပျိုးရန်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းများကိုသင့်အားပြပါလိမ့်မည်။
por Adrian Da Cuña လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
အိုဘုရားသခင်၊ ၁ မှ ၈၀၀ အထိဤ Skinning လမ်းညွှန်တွင်မည်ကဲ့သို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးနည်းကိုသွားရမည်နည်းကိုသင်ပေးပါမည်။
Legion 1-800 မှအရေခွံလမ်းညွှန် - မစ်ရှင်များပါ ၀ င်သည်
por Ana Martin လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
ကောင်းတယ် ဤလမ်းညွှန်တွင် Legion ရှိ Skinning မစ်ရှင်များအားသင့်အားတစ်ဆင့်ချင်းပြသပါမည်။ ... ၏ကွင်းဆက်ဖြည့်စွက်
Draenor အရေခွံလမ်းညွှန် ၁-၇၀၀ ပြင်ဆင်ထားသော ၆.၂
por Adrian Da Cuña လွန်ခဲ့တဲ့6အနှစ် .
အိုဘုရားသခင်၊ သင်၏အဆင့် ၇၀၀ ကိုရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးမည့် Draenor Skinning လမ်းညွှန်မှကြိုဆိုပါသည်။
por Wow လမ်းညွှန်များ လွန်ခဲ့တဲ့9အနှစ် .
ဤလမ်းညွှန်သည်သင်၏ Skinning အလုပ်အကိုင်ကို ၁ မှ ၆၀၀ သို့အမြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်ရွှေကိုရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ရန်မဟုတ်ကြောင်း၊ သင့် Skinning ကိုမြှင့်တင်ရန်အလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းကိုပြသသည့်ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ။ ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်ကစားသမားများကိုပြောင်းလဲလိုသောအဆင့်မြင့်ကစားသမားများကိုရည်ရွယ်သော်လည်း၎င်းသည်အဆင့်နိမ့်ကစားသမားများအတွက်မကောင်းဟုမဆိုလိုပါ။ သင်၏အသားအရေကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်လွယ်ကူသော်လည်းအလွန်ပျင်းစရာကောင်းလိမ့်မည်။ သငျသညျလှည့်ပတ်သွားနှင့်လူပေါင်းရာပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ပင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လူအုပ်စုအရေပြားရပါလိမ့်မယ်။ အရေခွံကိုသားရေလုပ်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
လူစုလူဝေးသည်သင့်အတွက်အနီရောင် / လိမ္မော်ရောင်ရှိလျှင်ပင်၎င်းသည်သင့်ကိုအမှတ်တစ်ခုမြှင့်တင်လိမ့်မည်ဟုအာမမခံပါ။ ၎င်းသည်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော်လည်း၎င်းကိုတစ်ချိန်လုံးမျှော်လင့်မထားပါနှင့်။
por Tosundelmarg လွန်ခဲ့တဲ့ 12 အနှစ် .
ဤ အရေပြားလမ်းညွှန် ၎င်းသည်သင်၏အလုပ်ကိုအဆင့် ၁ မှ ၄၅၀ အထိအဆင့်မြင့်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကိုပြသလိမ့်မည်။ patch 1 ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်သူများ၏အလုပ်အကိုင်ကိုပြောင်းလဲလိုသူများအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်နိမ့်သောအဆင့်ရှိသူများအတွက်ပြrulနာမရှိချေ။ သင့်ရဲ့အဆင့်ကခွင့်ပြုအဖြစ်တိုးတက်လာ။ အရေခွံအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်သည်လွယ်ကူသော်လည်းသင်ဤလမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာပါကပိုမိုလွယ်ကူလျှင်မြန်လိမ့်မည်။
အရေခွံအလုပ်နှင့်အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုမှာသားရေလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးသင်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာနိုင်ပါသည် သားရေလုပ်ခြင်းလမ်းညွှန် ကြောင်းအလုပ်အကိုင်တက်ဖို့။
ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့် ဖော်မြူလာ: ဝိဇ္ဇာအတတ်အားလက်အိတ်များ - အရေပြား သင်၏အသားအရေစွမ်းရည်ကို ၅ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သို့မှသာသင်လုပ်နိုင်သည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောရန်သူများကိုအသားပေးနိုင်သည်။ အခြားစုဆောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုပဲ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ y သတ္တုတူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းအဘယ်သူမျှမအဆင့်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်။
1-75 Durotar၊ Dun Mororg
75-155 / 165 အဆိုပါ Barrens, Loch Modan နှင့် The Wetlands
155 / 165-205 တစ်ခါသုံးအပ်နှင့် Arathi ကုန်းမြင့်ဒေသများ
205-300 Un'Goro Crater နှင့် Feralas
300-360 Hellfire ကျွန်းဆွယ်နှင့် Nagrand
360-450 Boreal Tundra နှင့် Sholazar ဝှမ်း